Olee otú ịchọta ma na-ele iTunes ndabere faịlụ maka iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Ebee bụ iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị?
Na-agba ọsọ iTunes na kọmputa gị nwere ike ịbụ na a ọrụ kwa ụbọchị n'ihi unu, na ị maara na iTunes nwere ike akpaghị aka n'ịwa a ndabere maka ngwaọrụ gị. Ị nwere ike iweghachi gị iPhone si aga ndabere ọ bụla ị chọrọ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị ebe iTunes ndabere faịlụ na-emi odude ha na kọmputa. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha, echegbula, ebe a bụ ọnọdụ nke iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị:
iTunes ndabere na ọnọdụ na Mac: ~ / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere / iTunes ndabere na ọnọdụ na Windows XP: \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ iTunes ndabere na ọnọdụ na Windows Vista, Windows 7, na Windows 8: \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ Iji ngwa ngwa ịnweta AppData nchekwa, pịa Malite. Na search mmanya, ụdị% AppData% na pịa Return.
Olee otú m nwere ele iTunes ndabere faịlụ na PC ma ọ bụ Mac
Ịchọta ndabere faịlụ apụtaghị na ị na-na na n'ezie nwetara ya. Iji chebe onwe onye nzuzo, iTunes ndabere bụ ụdị SQLITEDB faịlụ, nke na-adịghị ka onye ọ bụla iji nweta ma ọ preview. Ị naanị nwere ike iweghachi ihe dum ọdịnaya ngwaọrụ gị, otu SMS ma ọ bụ kọntaktị nyeghị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ya, i kwesịrị a ngwá ọrụ dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery). Ọ na-enye gị ka ị na-ele niile nkọwa nke gị iTunes ndabere ọdịnaya na 2 nzọụkwụ.
iTunes ndabere onyenlereanya
Naanị 2 nzọụkwụ, ị nwere ike ịnweta iTunes ndabere ọdịnaya na zuru ezu!
Wepụ niile iTunes ndabere faịlụ maka iPhone, iPad na iPod aka.
Ruo 17 faịlụ na ụdị nwere ike anya na natara site iTunes ndabere.
Nhọrọ preview na mgbake dị n'oge ọ bụla.
Bụkwa maka iCloud ndabere.
Ọ dịghị data ọnwụ na n'ihe ize ndụ-free.
Ele iTunes ndabere na Windows
Ele iTunes ndabere na Mac
Nke a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu dabeere na Windows sistemụ. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, nzọụkwụ ndị bụ n'ezie otu, ma ị ka nwere ike ịgbanwee gaa na Mac-dabeere nkuzi site bọtịnụ n'elu.
Nzọụkwụ 1. Họrọ otu iTunes ndabere ma wepụ ya
Dr.Fone Maka iOS na-enye gị ụzọ atọ nke data mgbake. Iji nweta ma na-ele iTunes ndabere faịlụ, i kwesịrị ịhọrọ otu n'ime "naputa site na iTunes ndabere faịlụ". Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ gị niile iTunes ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa. Họrọ onye ị chọrọ iji nweta na pịa na "Malite iṅomi" button n'ihu.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data si iTunes ndabere
Mgbe iṅomi zuru ezu, ị nwere ike ịlele nza nke ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, dị ka ozi kọntaktsị, foto, ndetu, oku log, kalenda na otú pụta. N'oge preview, ị nwere ike nne Mmetụta ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị site na ịpị nanị na "Naghachi" button.
Nke a ndu na-akpan dere maka Mac ọrụ. Biko download na wụnye iTunes ndabere onyenlereanya na gị Mac. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru iji nweta iTunes nkwado ndabere na mpaghara naghachi ihe ị chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iTunes ndabere faịlụ ma wepụ ya
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac, gaa na mode nke "Naghachi Data si iTunes ndabere faịlụ". Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-achọpụta rụọ niile iTunes ndabere faịlụ na gị Mac. Họrọ onye na ị na-aga iji nweta ma na-ele. Pịa na "Malite iṅomi" bọtịnụ exrtact ọdịnaya si ndabere.
Nzọụkwụ 2. View iTunes nkwado ndabere na mpaghara naghachi data gị Mac
The Adịrị na-ewe gị ole na ole sekọnd. Mgbe ọ mere, ị nwere ike na-ele niile data amịpụtara si iTunes ndabere faịlụ otu otu. Akara ọ bụla data ị chọrọ ịzọpụta na gị Mac na pịa na "Naghachi" button ime ya.
Gịnị kpọmkwem ị pụrụ ele na naputa site na iTunes ndabere na Dr.Fone maka iOS
Text ọdịnaya Media ọdịnaya
Ozi (iMessage na ụgbọelu SMS ma ọ bụ MMS)
Safari ibe edokọbara
3rd ọzọ ngwa akwụkwọ
Igwefoto Roll (photos, screenshots, oyiyi azọpụta, na videos e)
Ozi olu ozi olu
Ozi Mgbakwụnye (iMessage, MMS, WhatsApp)
3rd ọzọ ngwa video / foto / audio
Mmekọrịta iTunes na Android na 1 Pịa
Olee otú mbubata iTunes Library ka Winamp
> Resource> iTunes> Olee otú iji Chọta na-ele iTunes ndabere faịlụ